Bitootessa 11, 2020
Wal dhabaii kun gama Awaashii fi Bordoddeeti nama hedduutti lubbu dhabee qabeenna hedduutti bade jedhan.
Oromiayaatti akka bulchaan aanaa Qumbii-Bordoddee jedhetti nama 10 du’ee 7 madaahe jedhe.
Madooleen akka jecha itti gaafatamaa biiroo fayyaa godinaatti madoolee fi nama lubbuu dhabellee hospitala Asebootitti geessanii malee lakkoofsaan mirkanaa miti.Affaarilleen nama tokkotti tanaan du’ee 10 madaahe jedhe.Rakkoon tun gara ji’a 6tiin duratti jalqabde jedhan.
Namii naannoo Affaari irraa dubbate obboo Kadir Ahmed akkana jedhe.“Akkuma duruu jedhan marra irratti wal dhaban jedhan.Gara ganna 10n duratti sehaa hawaasii Oromoo bonaa jedhee garanatti godaane.Bonii dabre jennaan deebihuu didan.”
Bulchaan Bordoddee obbo Muusaa Yuusuf tanatti hin dhugeeffatu.“Warra qophaahee hidhatetti km 5 nutti seenee nu hadhe.Ganamaan nu hahdan. Waranaa hidhate qofatti ollaa keenna seenee nu hadhe.Bulchiinsa Affaaritti keessa jira dhufuee nu lole.Qabeenna miliyoona lama caala balleessan.Kaan hin saaman.Waan hedduu balleessan.”
Bulchiinsii biiroo nagaa Affaar wal dhabii kun marraa fi bisaan irraa dhufe jedha.
Bulchiinsii Oromiyaa ammoo hujiin tun ta saba obboleeyyanii wa lolchiisuuf hojjatanii warra tana hojjate seeraan gaafachuuf bulchiinsii “jabaatee hojjanna.”
Akka bulchiinsii Oromiyaa jedhetti warii nama nagaa ficcisiisu kun warra karaa gabaabaan mootummaa harkatti deeffachuuf ummata bara hedduu waliin jiraate wal aasisu.